अपाउनुहोस् यी उपाय, सात दिनमै शरीर स्लिम ! – Jagaran Nepal
अपाउनुहोस् यी उपाय, सात दिनमै शरीर स्लिम !
प्राय: सबै केटीहरुका लागि अहिलेको मूख्य समस्या भनेको कसरी सुन्दर देखिने भन्ने हो । त्यसमा पनि आफ्नो लुक्स र शरीरलाई कसरी अरुको भन्दा आकर्षक बनाउनेतर्फ नै उनीहरुको बढी ध्यान जान्छ । तर पनि कयौंपटक मोटो शरीर र कपडाभन्दा बाहिर निस्किएको पेटले उनीहरुलाई ठूलो समस्यामा पारिदिन्छ ।
वर्कआउटका कारण पेटमा रहेको बोसो छिट्टै पग्लिन्छ । यसका लागि पेटसँग जोडिएका व्यायाम जस्तै पुश-अप, पुल–अप आफ्नो वर्कआउटमा सामेल गर्नुहोस् । यस्तो व्यायामले नियमित रुपमा ५०० देखि ६०० क्यालोरी बर्न गर्न सकिन्छ ।
शरीरको तौल घटाउनका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, तनावबाट टाढा रहनु । तनवका कारण शरीरमा कोर्टिसोल जस्तो हर्मोन सञ्चार हुन्छ। जसले गर्दा शरीरको तौल छिट्टै बढ्न जान्छ । त्यसकारण तनावबाट टाढा रहन आफूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस् ।